Yeungnam University - Higher Education an-tany hafa any Korea Atsimo
fanafohezan-teny : Yu
Aza adino ny miresaka momba Yeungnam University
Misoratra anarana ao amin'ny Yeungnam University
Ny Yeungnam University ny Fanahin 'ny vahoaka Koreana.
“jereo, eto dia ny taloha tany ny Silla Fiankohonana Izay misy ny fanahin'i velona ny firenena.”
Araka ny voalaza ao amin'ny oniversite hiram-pirenena, Yeungnam University no toerana fiainana Hita taratra
araka ny fanahin'ny Korea mavitrika.
Koa satria ny fototra amin'ny 1947, Yeungnam University no Nandray anjara lehibe amin'ny indostria,
demaokrasia sy ny fampandrosoana an'i Korea namokatra mihoatra noho 190,000 tsara Alumni monina
ny fanabeazana filozofia ny "fananganana ny firenena amin'ny fampianarana’ ary 'mamelombelona ny firenena'.
Miorina amin'ny midadasika ny traikefa sy ny fahaizany voangony ny farany 60 taona,
mandrakariva isika miezaka ny hanangana hoavy tsara kokoa mba hihaona ny zavatra andrasana avy amin'ny tsirairay taranaka vaovao.
Ny University ho an'ny firenena, ny Yeungnam University ho an'izao tontolo izao
Mandrak'izao, Yeungnam University dia nilalao-dehibe tamin'izay anjara eo amin'ny fanabeazana ny olona loharanon-karena any Korea.
Isika dia manao io 'University ho an'ny firenena’ ny 'University ho an'izao tontolo izao’ alalan'ny fiaraha-miasa aminareo izao
ary ny hoavy.
“Hendry sy ny tanora fanahy, matanjaka sy ny tanora hery, ho ny mpamorona ny
tantara vaovao ho an'ny firenena sy ny olombelona rehetra. Ah, Yeungnam University dia mitombo sy ny tanindrazana.
Ah, loharanon'ny fahamarinana sy ny tilikambo fanilon-tsambo ny fianarana.”
Efa ela ny olona nanadino ny iraka manan-danja indrindra sy ny loharano ny maha. Yeungnam University manomboka mba hampahatsiahy ny firenentsika ny mpamorona fanahin'ny Korea teo aloha Filoha, Mr. Park Chung-hee, 'Mamoròna tantara vaovao sy hamelombelona ny firenena tia tanindrazana mifototra amin'ny fanahy'.
ankehitriny, dia mitana toerana nitarika andraikitra hamorona vidiny sy ny fahalalana ho an'ny tenantsika, ny fiaraha-monina, ny firenentsika sy izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fahafantarana ny asa fitoriana izany sy ny maha an'i Yeungnam University.
Ny Yeungnam University mafy fototra sy fahaizana fototra anatiny
University dia mifantoka amin'ny fananganana anatiny mihitsy fototra fahaizana any ivelany fa tsy tsara tarehy sy ny kabary tsara lahatra. Yeungnam dia hiroborobo toy ny malaza anjerimanontolo tsy miankina amin'ny toerana akademika fanavahana ankatoavin'ny roa ny faritra fiaraha-monina sy izao tontolo izao. Mba hanatrarana izany, Yeungnam University dia indray-hanamafy orina ny fototra. Isika hamorona ny oniversite mpampianatra izay miezaka ho tsara amin'ny fampianarana sy ny fikarohana, mpianatra atao ho tsara eo amin'ny fianarany sy eo amin'ny tsenan'ny asa sy ny oniversite mpiasa manao ny tsara indrindra ao amin'ny fandaharana ny fitantanana ny tolotra.
Ny vondrom-piarahamonina University mihetsiketsika miara-, “Go Yu, Mandehana Together”
To hanan-tombo, University dia nifantoka tamin'ny miasa mafy kokoa sy tsara kokoa. Tsy afaka manidina tsy mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha feno. Fantatsika tsara fa ny fahitana sy ny herin 'ny manidina soavaly (Chunma) ao amintsika.
A University famoronana nofy, hoavy sy ny fahasambarana
Ny fianarana sy ny fitadiavana ny fahamarinana manampy amin'ny fanatsarana ny olona, fiaraha-monina, firenena sy, farany, izao tontolo izao. Yeungnam University dia hanohy manome vàhana soatoavina ireo manao ho toy ny toerana mba hamorona ny nofy, ny hoavy sy ny fahasambarana eo amin'izao tontolo izao.
College ny Liberaly Arts
College ny Lalàna
College ny siansa politika sy ny Public Administration
College of Business sy ny Toekarena
College ny Medicine
College ny Pharmacy
College fiainana sy Applied Siansa
College ny Human Ecology & Kinesiology
College ny Design & Art
College fototra Fianarana
Sekoly Fianarana ny Iraisam-pirenena
Yeungnam University naorina tao 1967 ny alalan 'ny Fampitambarana Daegu College sy Chunggu College izay naorina tamin'ny 1947 ary 1950 mifanaraka. Mr. Lee, Dong Nyoung Natokana ho voalohany ny filohan'ny Filankevi-pitantanan'ny. Tamin'ny taona ihany Yeungnam University nankatoavin'ny toy ny manomboka amin'ny 6 Oniversite noho ny Ministeran'ny Fanabeazana: College ny Liberaly Arts, College ny Engineering, College ny lalàna sy ny siansa politika, College ny Varotra sy ny Toekarena, College ny Pharmacy, sy ny hariva Programs, amin'ny 35 undergraduate departemanta sy ny 12 nahazo diplaoma sampan-draharaha. In 1968 Janoary 1, Dr. Shin, Ki hitsentsitra Natokana ho filoha voalohany ao amin'ny University sy amin'ny 1969 dia efa nanomboka ny fanorenana ny Main Campus in Gyeongsan.
Teo am-piandohan'ireo taona 1970, ny Graduate School of Management sy Graduate Departments ny Teny sy ny Haisoratra Koreana, lalàna, ary rehefa afaka izany, Toekarena niorina ny Main Administration Offices, College ny Liberaly Arts, College ny Lalàna & Siansa politika sy College ny Varotra sy ny Toekarena dia nafindra avy amin'ny Daegu fonenan'ny mpianatra. Nandritra ny tapaky ny taona 1970 ny 21-tantara lehibe tranomboky-cum-sampam-pianarana birao sy ny tena tanteraka ihany koa ny fitantanana trano. Nandritra ny taona 1980, Yeungnam University hopitaly, Foreign Language Institute sy University Museum nisokatra.
In 1996, Yeungnam University no ankasitrahana ho toy ny Excellent University in Undergraduate sy Graduate Sekoly, ary koa tahaka ny “Best University” tany an-tsaha ny fandraharahana sy ny varotra iraisam-pirenena, ny Koreana University Komitin'ny Fanabeazana. In 1997, Yeungnam University dia voafidy ho toy ny “Governemanta-Sponsored Program for Siansa Fanabeazana” ao amin'ny faritra ny fototra siansa sy ny fanabeazana ary laboratoara voafidy ho ny manara-maso ny anjerimanontolo ho modely Technopark Project. Taorian'ny taona i University Yeungnam voafidy ho toy ny milina manara-maso University any an-tsaha, ary ho toy ny manatrika University in Information Technology an-tsaha ho an'ny ny fandaharana ny mitaiza oniversite eo an-toerana ao amin'ny Brain Korea Project ary koa ny oniversite voafidy noho ny Ministeran'ny Siansa sy ny Teknolojia ho Fikarohana Information Center for Textiles ary fitafiana Science.
Tamin'ny taona 2000, Yeungnam University nametraka ny nahazo diplaoma Departemantan'ny Architectural Design, Multimedia Communications, Bio-teknolojia sy ny sampan-draharaha nahazo diplaoma ny Sino-Koreana sy Textile Engineering in Dokotera ny ambaratonga. In 2001 University nanova ny Sekoly ofCommerce sy Toekarena ho any amin'ny sekoly ny vola sy Business miaraka amin'ny Sekoly vola sy ny Toekarena sy ny Sekoly InternationalEconomics sy Business. In 2003 ny Graduate School of Clinical Pharmacy nekena, manomboka amin'ny nahazo diplaoma Departemantan'ny ClinicalPharmacy. Ny fametrahana ny Graduate School of Science Sports nankatoavina, manomboka amin'ny departemanta ny nahazo diplaoma ny Sports Science.
Isan-taona ireo mpianatra iraisam-pirenena maro no hiaraka amin'ny Yeungnam University noho ny Masters na Ph.D. ambaratonga sy mivoaka eo amin'ny asa fikarohana. Maro amin'ireo mpianatra no avy any Shina, Uzbekistan, Indonezia, Bangladesy, India, Nepal, Bolgaria, Ejipta, Malezia, Pakistan, Mongolia, i Vietnam,Polonina, Japana, Peru, Senegal sy ny hafa firenena isan-karazany.
Yeungnam University akademika amin'izao fotoana izao dia manana fifanarahana amin'ny Anjerimanontolo isan-karazany manerana izao tontolo izao toy ny, University of Montana, Old Dominion University, Oniversiten'i Michigan, State University of New York ao amin'ny Albany, Iowa State University of United States, University of Alberta ao Kanada, University of Haute Alsace (satria 1999), Novosibirsk State University, Novosibirsk State University teknika Rosia, Fukui University sy Shinshu University of Japana sy ny maro hafa Oniversite an'i Ozbekistan sy Shina tahaka Nanjing University, Nankai Universityand Lingnan University, Hong Kong.
In 2010 Yeungnam University no voafantina iray amin'ireo ambony 10 Asian Anjerimanontolo iraisam-pirenena fa ny fiovana lehibe ao amin'ny Global fanabeazana ny taonarivo vaovao avy any Azia ny masoivoho'i tatitra vaovao.
Ianao ve mila miresaka momba Yeungnam University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Yeungnam University ao amin'ny Map
Yeungnam University Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Yeungnam University.
Hankuk University of Foreign Fianarana Seoul